2-58(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-59(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-60(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-61(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-62(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-63(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊အမရပူရမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-64(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မန္တလေးခရိုင်၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-65(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-66(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊မြစ်သားမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-67(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ကူမဲမြို့နယ်၏ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-68(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊တံတားဦးမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-69(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ညောင်ဦးခရိုင် ၊ ညောင်ဦးမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-70(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ညောင်ဦးခရိုင်၊ပုဂံမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-71(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ညောင်ဦးခရိုင်၊ငါ့သရောက်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-72(T)/ MESC (F) / 2020-2021
မြင်းခြံခရိုင် ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-73T)/ MESC (F) / 2020-2021
ရမည်းသင်းခရိုင်၊ရမည်းသင်းမြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-74(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ရမည်းသင်းခရိုင်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
2-75(T)/ MESC (F) / 2020-2021
ရမည်းသင်းခရိုင်၊ရန်အောင်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို ကွန်ပျူတာ စနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာ စာရင်း ရေးသွင်း ၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်
၂။ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့် စည်းကမ်းချက်များကို ( ၈ . ၂ .၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး( ၁၅ . ၂ .၂၀၂၁) ရက်( ၁၄ :၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါ ပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။